ဂပြနျမှာဘာလို့ Dota2 Pro ကစားသမား မရှိရတာလဲ? – Gaming Noodle
ဘယျမလဲ ဂပြနျ Dota2Pro?
၂၀၁၉-၂၀၂၀ DPC season ကွီးရဲ့ အစမှာ အာရှ Dota2အသငျးမြားရဲ့ အားကောငျးနမှေုကို အတျောမြားမြားလညျး သတိထားမိကွမှာပါ။ တရုတျနဲ့ အရှတေ့ောငျအာရှဒသေမြားဟာ Dota2နယျပယျရဲ့ အရေးကွီးအစိတျအပိုငျးတှဖွေဈနခေဲ့တာ အစဉျအလာကွီးတဈခုလို ဖွဈနပေါပွီ။ ဒါပမေယျ့ ဂပြနျနိုငျငံလို ဂိမျးနဲ့ပတျသကျလို့ ထှနျးကားတဲ့နိုငျငံကို Dota2ပှဲတှမှော မတှရေ့တဲ့ကိစ်စကတော့ မေးခှနျးထုတျစရာ ဖွဈလို့နပေါတယျ။
Dota2ဟာ အာရှတဈခှငျမှာ အလှနျခတျေစားလှပမေယျ့ ဂပြနျနိုငျငံမှာတော့ Dota2အပါအဝငျ MOBA ဂိမျးအတျောမြားမြားဟာ နရောကောငျး မရကွသေးဘူးလို့ ယူဆရပါတယျ။ Dota2ပွိုငျပှဲကွီးမြားအတှငျးမှာ ဂပြနျ pro ကစားသမား မမွငျတှရေ့ခွငျးက ဒီယူဆခကျြကို ထောကျခံလကျြရှိပါတယျ။
Gaming mechanic မြားနဲ့ ပတျသတျလို့ ကြှမျးကငျြကွောငျး နာမညျကွီးတဲ့ ဂပြနျမြား MOBA လောက ကနေ ပြောကျကှယျနတေဲ့ကိစ်စက အံ့အားသငျ့စရာပါ။ Liquipedia ရဲ့ ဖျောပွခကျြအရတော့ ဂပြနျအသိုငျးအဝိုငျးနဲ့ ဆကျနှယျပွီး ဖှဲ့စညျးခဲ့တဲ့ Dota2အဖှဲ့အစညျးဆိုလို့ DeToNator နဲ့ AffectioN နှဈခုပဲ ရှိခဲ့ဖူးပါတယျ။
From Mara Cup (Youtube Video)
Esports ဟာ ဂပြနျမှာ တရားမဝငျတဲ့ လောငျးကစားတဈခုလား
ဂပြနျ Dota2pro ကစားသမားမြားကို မမွငျတှခွေ့ငျးဟာ အကွောငျးရငျးမြားတော့ ရှိပါတယျ။ ဂပြနျနိုငျငံရဲ့ ဂိမျးလောကနဲ့ ပတျသကျတဲ့ ဥပဒအေခြို့ဟာ ဒီအကွောငျးရငျးမြားထဲက တဈခုပါ။ မကွာသေးမီအခြိနျထိ ဗီဒီယိုဂိမျးပွိုငျပှဲမြားကနေ ဆုကွေးငှအေနိုငျရခွငျးကို ခြုပျခွယျကနျ့သတျထားတဲ့ဥပဒမြေား ဂပြနျနိုငျငံမှာ ရှိနဆေဲပါ။
Esports နဲ့ ပတျသကျလို့ တိုကျရိုကျကနျ့သတျထားခကျြမြား မရှိပမေယျ့ ယငျးဥပဒမြေားဟာ ဂပြနျ Esports ပွိုငျပှဲမြားရဲ့ ခတျေစားမှုကို ထိနျးခြုပျထားသလို ဖွဈနပေါတယျ။ အကွီးမားဆုံးပွဿနာကတော့ “Act against Unjustifiable Premiums and Misleading Representations” လို့ အမညျပေးထားတဲ့ ဥပဒဖွေဈပွီး Esports ပွိုငျပှဲတဈခုရဲ့ ဆုကွေးငှကေို ၁၀၀,၀၀၀ ယနျး (ဒျေါလာ ၉၀၀) သာ အမြားဆုံးခြီးမွှငျ့ရမယျလို့ ကနျ့သတျထားသလို ဖွဈနပေါတယျ။
တကယျတော့ အထကျပါဥပဒဟော စီးပှားဖွဈထုတျကုနျမြားကို ရောငျးအားမွှငျ့တငျဖို့နဲ့ လူကွိုကျပိုမြားလာအောငျ ဆှဲဆောငျဖို့ ရညျရှယျတဲ့ ကွျောငွာပှဲမြားပွုလုပျရာမှာ ခြီးမွှငျ့မယျ့ ဆုကွေးကို ကနျ့သတျဖို့ ရညျရှယျထားတာပါ။ ဂိမျးမြားကိုလညျး စီးပှားဖွဈထုတျကုနျတဈမြိုးအဖွဈ ယူဆလိုကျတဲ့အတှကျဂိမျးပွိုငျပှဲမြားဟာ ကွျောငွာပှဲမြားဖွဈလာရပွီး ဂပြနျ Esports နယျပယျအတှကျ ဆိုးကြိုးသကျရောကျနရေခွငျးဖွဈပါတယျ။
Esports ကို သှယျဝိုကျသောနညျးလမျးတှနေဲ့ လောငျးကစားအဖွဈ သတျမှတျတာတှကေလညျး ရှိပါသေးတယျ။ Dota2ဟာ လောငျးကစား လုံးဝမဟုတျပမေယျ့ Dota2ပှဲမြားနဲ့ ပတျသကျပွီး လောငျးလို့ရတဲ့ betting service တှကေ ဂပြနျနိုငျငံရဲ့ Dota2အပျေါ အမွငျကို လှဲနစေပေါတယျ။ ဂပြနျနိုငျငံမှာ လောငျးကစားလုပျခွငျးကို ဥပဒမြေားစှာနဲ့ တားမွဈထားပါတယျ။
ဂပြနျနိုငျငံတရားရုံးခြုပျရဲ့ သတျမှတျခကျြအရ ဂိမျးပှဲတဈခုကနေ ဆုကွေးငှအေနိုငျရရှိအောငျ ကွိုးပမျးဟာ လောငျးကစားလုပျခွငျးဖွဈတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ Dota2ပွိုငျပှဲဟာ လောငျးကစားမဆနျကွောငျး လူအမြား သိနကွေပမေယျ့ ဒီသတျမှတျခကျြဟာ နိုငျငံတှငျး Esports ခတျေစားလာဖို့ တဈနညျးတဈဖုံ တားမွဈထားသလို ဖွဈနပွေနျပါတယျ။
ယနခေ့တျေ Esports ဟာ တဈကမ်ဘာလုံးမှာ အရှိနျအဟုနျနဲ့ ကယျြပွနျ့လာတာကိုတော့ ဂပြနျ သတိထားမိပါတယျ။ ၂၀၁၈ မှာ ဂပြနျနိုငျငံရဲ့ အရေးကွီးဆုံး Esports အဖှဲ့အစညျးဖွဈတဲ့ Japanese esports Union (JeSU) ကို ဖှဲ့စညျးခဲ့သလို အခြို့ကစားသမားမြားနဲ့ ဂိမျးမြားကို ပွိုငျပှဲပွုလုပျကစားခှငျ့မြား ထုတျပေးခဲ့ပါတယျ။ ယခုနှဈ Tōkyō Game Show မှာလညျး Dota2ပွိုငျပှဲအသေးစားတဈခုပွုလုပျခဲ့ပွီး ပှဲကို Twitch ပျေါမှာ လှငျ့ခဲ့ပါသေးတယျ။
ဂပြနျနိုငျငံသားမြားအတှကျ Dota2ကစားဖို့ ခကျခဲမှု
Streamer တဈဦးဖွဈသူ Hokutora က ဂပြနျနိုငျငံသားမြား Dota2ကစားဖို့ ခကျခဲနရေခွငျးရဲ့ အဓိကအကွောငျးအရငျးနှဈခုကို ထုတျဖျော ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။ ပထမတဈခုကတော့ Dota2ရဲ့ အပွိုငျအဆိုငျ MOBA ဂိမျးဖွဈတဲ့ League of Legends ကွောငျ့ပါ။ League ဟာ ဂပြနျဘာသာနဲ့ အပွညျ့အဝ ပွနျဆိုထားပွီးသားဖွဈလို့ ဂပြနျမြားအတှကျ လလေ့ာရလှယျကူနပေါတယျ။ League ရဲ့ graphic မြားဟာလညျး anime စတိုငျနဲ့တူလို့ ဂပြနျမြား ရှေးခယျြကစားဖို့ အဆငျပွလှေပါတယျ။
ဒုတိယတဈခုကတော့ Dota2ကို ဂပြနျဘာသာနဲ့ ပွညျ့ပွညျ့ဝဝ ပွောငျးလဲနိုငျခွငျး မရှိတာပါ။ ဂိမျးကို ဂပြနျဘာသာပွောငျးလိုကျရငျ အခြို့အခကျြမြားဟာ မူလအတိုငျး အင်ျဂလိပျလိုပဲ ကနျြနခေဲ့ပါတယျ။ Hero မြားရဲ့ skill explanation မြားနဲ့ item detail မြားလို အရေးကွီးအခကျြအလကျတှေ မပွောငျးလဲပဲ ကနျြနခေဲ့တဲ့အခကျြက အင်ျဂလိပျစာအားနညျးလရှေိ့တဲ့ ဂပြနျအမြားစုအတှကျ Dota2ကစားဖို့ အခကျအခဲအဖွဈ ရှိနပေါတယျ။
ဂပြနျ Dota2ကစားသမား အရအေတှကျ သိသိသာသာမြားပွားလာဖို့ကတော့ မလှယျကူလှပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ အနာဂတျမှာ ဂပြနျကစားသမားမြားကို လကျရှိအငျအားကွီး Dota2အဖှဲ့အစညျးတဈခုက ချေါယူလိုကျရငျတော့ ဂပြနျ Dota2pro မြား ပျေါထှနျးလာနိုငျပါတယျ။ ဂပြနျနိုငျငံရဲ့ Dota2နဲ့ Esports အရေးကလညျး စိတျဝငျစားဖှယျဖွဈလို့ ဖျောပွလိုကျရပါတော့တယျ။ Esports အကွောငျးအရာမြားနဲ့ သတငျးမြားကို Gaming Noodle မှ အမွဲမပွတျတငျဆကျပေးလကျြရှိပါတယျ။
ဘယ်မလဲ ဂျပန် Dota2Pro ?
၂၀၁၉-၂၀၂၀ DPC season ကြီးရဲ့ အစမှာ အာရှ Dota2အသင်းများရဲ့ အားကောင်းနေမှုကို အတော်များများလည်း သတိထားမိကြမှာပါ။ တရုတ်နဲ့ အရှေ့တောင်အာရှဒေသများဟာ Dota2နယ်ပယ်ရဲ့ အရေးကြီးအစိတ်အပိုင်းတွေဖြစ်နေခဲ့တာ အစဉ်အလာကြီးတစ်ခုလို ဖြစ်နေပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ဂျပန်နိုင်ငံလို ဂိမ်းနဲ့ပတ်သက်လို့ ထွန်းကားတဲ့နိုင်ငံကို Dota2ပွဲတွေမှာ မတွေ့ရတဲ့ကိစ္စကတော့ မေးခွန်းထုတ်စရာ ဖြစ်လို့နေပါတယ်။
Dota2ဟာ အာရှတစ်ခွင်မှာ အလွန်ခေတ်စားလှပေမယ့် ဂျပန်နိုင်ငံမှာတော့ Dota2အပါအဝင် MOBA ဂိမ်းအတော်များများဟာ နေရာကောင်း မရကြသေးဘူးလို့ ယူဆရပါတယ်။ Dota2ပြိုင်ပွဲကြီးများအတွင်းမှာ ဂျပန် pro ကစားသမား မမြင်တွေ့ရခြင်းက ဒီယူဆချက်ကို ထောက်ခံလျက်ရှိပါတယ်။
Gaming mechanic များနဲ့ ပတ်သတ်လို့ ကျွမ်းကျင်ကြောင်း နာမည်ကြီးတဲ့ ဂျပန်များ MOBA လောက ကနေ ပျောက်ကွယ်နေတဲ့ကိစ္စက အံ့အားသင့်စရာပါ။ Liquipedia ရဲ့ ဖော်ပြချက်အရတော့ ဂျပန်အသိုင်းအဝိုင်းနဲ့ ဆက်နွယ်ပြီး ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ Dota2အဖွဲ့အစည်းဆိုလို့ DeToNator နဲ့ AffectioN နှစ်ခုပဲ ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။
Esports ဟာ ဂျပန်မှာ တရားမဝင်တဲ့ လောင်းကစားတစ်ခုလား?
ဂျပန် Dota2pro ကစားသမားများကို မမြင်တွေ့ခြင်းဟာ အကြောင်းရင်းများတော့ ရှိပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ဂိမ်းလောကနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဥပဒေအချို့ဟာ ဒီအကြောင်းရင်းများထဲက တစ်ခုပါ။ မကြာသေးမီအချိန်ထိ ဗီဒီယိုဂိမ်းပြိုင်ပွဲများကနေ ဆုကြေးငွေအနိုင်ရခြင်းကို ချုပ်ခြယ်ကန့်သတ်ထားတဲ့ဥပဒေများ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ရှိနေဆဲပါ။
Esports နဲ့ ပတ်သက်လို့ တိုက်ရိုက်ကန့်သတ်ထားချက်များ မရှိပေမယ့် ယင်းဥပဒေများဟာ ဂျပန် Esports ပြိုင်ပွဲများရဲ့ ခေတ်စားမှုကို ထိန်းချုပ်ထားသလို ဖြစ်နေပါတယ်။ အကြီးမားဆုံးပြဿနာကတော့ “Act against Unjustifiable Premiums and Misleading Representations” လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ ဥပဒေဖြစ်ပြီး Esports ပြိုင်ပွဲတစ်ခုရဲ့ ဆုကြေးငွေကို ၁၀၀,၀၀၀ ယန်း (ဒေါ်လာ ၉၀၀) သာ အများဆုံးချီးမြှင့်ရမယ်လို့ ကန့်သတ်ထားသလို ဖြစ်နေပါတယ်။
တကယ်တော့ အထက်ပါဥပဒေဟာ စီးပွားဖြစ်ထုတ်ကုန်များကို ရောင်းအားမြှင့်တင်ဖို့နဲ့ လူကြိုက်ပိုများလာအောင် ဆွဲဆောင်ဖို့ ရည်ရွယ်တဲ့ ကြော်ငြာပွဲများပြုလုပ်ရာမှာ ချီးမြှင့်မယ့် ဆုကြေးကို ကန့်သတ်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားတာပါ။ ဂိမ်းများကိုလည်း စီးပွားဖြစ်ထုတ်ကုန်တစ်မျိုးအဖြစ် ယူဆလိုက်တဲ့အတွက်ဂိမ်းပြိုင်ပွဲများဟာ ကြော်ငြာပွဲများဖြစ်လာရပြီး ဂျပန် Esports နယ်ပယ်အတွက် ဆိုးကျိုးသက်ရောက်နေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Esports ကို သွယ်ဝိုက်သောနည်းလမ်းတွေနဲ့ လောင်းကစားအဖြစ် သတ်မှတ်တာတွေကလည်း ရှိပါသေးတယ်။ Dota2ဟာ လောင်းကစား လုံးဝမဟုတ်ပေမယ့် Dota2ပွဲများနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လောင်းလို့ရတဲ့ betting service တွေက ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ Dota2အပေါ် အမြင်ကို လွဲနေစေပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ လောင်းကစားလုပ်ခြင်းကို ဥပဒေများစွာနဲ့ တားမြစ်ထားပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံတရားရုံးချုပ်ရဲ့ သတ်မှတ်ချက်အရ ဂိမ်းပွဲတစ်ခုကနေ ဆုကြေးငွေအနိုင်ရရှိအောင် ကြိုးပမ်းဟာ လောင်းကစားလုပ်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ Dota2ပြိုင်ပွဲဟာ လောင်းကစားမဆန်ကြောင်း လူအများ သိနေကြပေမယ့် ဒီသတ်မှတ်ချက်ဟာ နိုင်ငံတွင်း Esports ခေတ်စားလာဖို့ တစ်နည်းတစ်ဖုံ တားမြစ်ထားသလို ဖြစ်နေပြန်ပါတယ်။
ယနေ့ခေတ် Esports ဟာ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ အရှိန်အဟုန်နဲ့ ကျယ်ပြန့်လာတာကိုတော့ ဂျပန် သတိထားမိပါတယ်။ ၂၀၁၈ မှာ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ အရေးကြီးဆုံး Esports အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ Japanese esports Union (JeSU) ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့သလို အချို့ကစားသမားများနဲ့ ဂိမ်းများကို ပြိုင်ပွဲပြုလုပ်ကစားခွင့်များ ထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ယခုနှစ် Tōkyō Game Show မှာလည်း Dota2ပြိုင်ပွဲအသေးစားတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ပွဲကို Twitch ပေါ်မှာ လွှင့်ခဲ့ပါသေးတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံသားများအတွက် Dota2ကစားဖို့ ခက်ခဲမှု
Streamer တစ်ဦးဖြစ်သူ Hokutora က ဂျပန်နိုင်ငံသားများ Dota2ကစားဖို့ ခက်ခဲနေရခြင်းရဲ့ အဓိကအကြောင်းအရင်းနှစ်ခုကို ထုတ်ဖော် ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ပထမတစ်ခုကတော့ Dota2ရဲ့ အပြိုင်အဆိုင် MOBA ဂိမ်းဖြစ်တဲ့ League of Legends ကြောင့်ပါ။ League ဟာ ဂျပန်ဘာသာနဲ့ အပြည့်အဝ ပြန်ဆိုထားပြီးသားဖြစ်လို့ ဂျပန်များအတွက် လေ့လာရလွယ်ကူနေပါတယ်။ League ရဲ့ graphic များဟာလည်း anime စတိုင်နဲ့တူလို့ ဂျပန်များ ရွေးချယ်ကစားဖို့ အဆင်ပြေလှပါတယ်။
ဒုတိယတစ်ခုကတော့ Dota2ကို ဂျပန်ဘာသာနဲ့ ပြည့်ပြည့်ဝဝ ပြောင်းလဲနိုင်ခြင်း မရှိတာပါ။ ဂိမ်းကို ဂျပန်ဘာသာပြောင်းလိုက်ရင် အချို့အချက်များဟာ မူလအတိုင်း အင်္ဂလိပ်လိုပဲ ကျန်နေခဲ့ပါတယ်။ Hero များရဲ့ skill explanation များနဲ့ item detail များလို အရေးကြီးအချက်အလက်တွေ မပြောင်းလဲပဲ ကျန်နေခဲ့တဲ့အချက်က အင်္ဂလိပ်စာအားနည်းလေ့ရှိတဲ့ ဂျပန်အများစုအတွက် Dota2ကစားဖို့ အခက်အခဲအဖြစ် ရှိနေပါတယ်။
ဂျပန် Dota2ကစားသမား အရေအတွက် သိသိသာသာများပြားလာဖို့ကတော့ မလွယ်ကူလှပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အနာဂတ်မှာ ဂျပန်ကစားသမားများကို လက်ရှိအင်အားကြီး Dota2အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုက ခေါ်ယူလိုက်ရင်တော့ ဂျပန် Dota2pro များ ပေါ်ထွန်းလာနိုင်ပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ Dota2နဲ့ Esports အရေးကလည်း စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်လို့ ဖော်ပြလိုက်ရပါတော့တယ်။ Esports အကြောင်းအရာများနဲ့ သတင်းများကို Gaming Noodle မှ အမြဲမပြတ်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။